Faah-Faahin ku saabsan tartan kubadda Koleyga oo ka socda magaalada Muqdisho.
Home Sports Faah-Faahin ku saabsan tartan kubadda Koleyga oo ka socda magaalada Muqdisho.
Waxaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ka socda tartan kubadda Kolayga ah oo ay ka qaybgalayaan kooxo ka socda degmooyinka gobalka Banaadir.
Ciyaartii ugu dambeesay waxaa ka dhacday Garoonka Kubadda Koleyga Degmada C/Casiis waxaana halkaas isku arkay Degmooyinka C/Casiis iyo Boomdheere.
Sida lagu sheegay war- qoraal ah oo ka soo baxay xiriirka kubadda kolayga ciyaartaas waxaa ay ku dhammaatayu 32-49 oo ay guusha ku raacday degmada Cabdi Casiis.
Ciyaarta labada kooxd ayaa waxay ku billaabatay dardar aad u xooggan, iyadoo qeybaha hore Ciyaartan labada degmo ee C/Casiis iyo Boondheere ay soo bandhigeen ciyaar aad loo jecleestay oo lagu tilmaamay mid isku dheelitiran.
Markii qaybta labaad la gaaray, wax badan ayaa is badalay ciyaarta, sababta ayaa lagu sheegay markii ay Xiddigaha kooxda Degmada C/Casiis ay garoonka soo geliyeen ciyaaryahano isfahamkoodu sareeyo oo u suragaliyay in ay ciyaarta ku dhamaystiraan 32-49.
Si kastaba, tartankan oo ay u soo daawaso tagaan dad aad u badan oo kala yimid degmooyinka gobalka Banaadir, ayaa waxaa uu wataa xiiso iyo xamaasad waxaana aad arkeysaa dad kala taageersan kooxaha ku ciyaaraya magacyad degmooyinka maagaalada Muqdisho.
Maalinta berri oo khamiis ah waxaa garoon ku yaalla degmada Wadajir isku arkaya kooxda Degmada Wadajir iyo koox ka socota degmada Waaberi, waana ciyaar aad loo sugaayo.